सिनियर कन्सलटेन्ट डा. सिद्धार्थ साहिनीका अनुसार ब्रेस्ट क्यानसरका लक्षणहरु यस्ता रहेका छन् ।
२–३ हप्तादेखी कफको समस्या बनिरहेको छ ? सास फेर्न समस्या भइरहेको छ ? वा छातीमा इन्फेक्सन भएको छ भने यो फोक्सोको क्यानसरको लक्षण हो ।